"रुपन्देहीको समग्र विकासको जिम्मा लिन्छौं, हामी एक अर्काका परिपुरक | Ekhabar Nepal
राजनीति मंसिर १६ २०७४ ekhabarnepal
भैरहवा, मंसिर १६ । नेकपा एमालेका उप–महासचिवद्धय विष्णु पौडेल रघनश्याम भुसालले रुपन्देहीको समग्र विकासको जिम्मा लिन आफूहरुतयार रहेको प्रष्टाएका छन् । सुरु भएका विकासका आयोजनाहरु सम्पन्न गर्दैरुपन्देहीलाई विकासको नमूना जिल्ला बनाउन उनीहरुले बामगठबन्धनलाई जिताउन मतदातालाई आग्रह गरे ।शनिबार भैरहवामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु समेत सम्मिलित पत्रकारसम्मेलनमा उप–महासचिवद्धय पौडेल र भुसालले जिल्लामा हाल सञ्चालन भैरहेका विकासका ठूला आयोजनाहरुमा आफूहरुको भूमिका महत्वपूर्णरहेको प्रष्टाए ।भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउनसंसदमा हस्ताक्षर बुझाउँदा हामीहरु दुवै जना सांसद थियौं ।’
उप–महासचिव पौडेलले भने,।त्यसले अहिले साकार रुप लिँदैछ ।भैरहवामा अरु पनि विकासका पूर्वाधारहरु बनाउनुछ । घनश्यामको साथपाउँदा यहाँ धेरै काम गर्न सकिन्छ ।’अर्का उप–महासचिव भुसालले बलियो सरकार गठन भएमाभैरहवाकोअन्तर्राष्ट्रियविमानस्थलको निर्माण कार्य नौ÷दश महिनामा सकिनेबताउँदै त्यसपछि पर्यटन प्रवद्र्धनका कामहरु गरिँदा समग्र रुपन्देहीकैंकायापलट हुने बताए । उनले भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानबनाउने, बुटवलमा जस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल बनाउनेलगायत विकासकोप्रष्ट भिजन बामगठबन्धनसँग रहेको जनाए । मुलुको समृद्धिको लागिलुम्बिनीको विकास हुनुपर्ने र लुम्बिनीको विकास हुन भैरहवाको विकासहुनुपर्ने उनले बताए ।
आफूले विगतमा एक्लै जित्दा विकासका कतिपय कामहरु चाहेर पनि गर्ननसकेको बताउँदै उप–महासचिव पौडेलले यसपटकको चुनावमाबामगठबन्धनलाई जिताउन मतदातालाई आग्रह गरे । यसअघि बुटवलक्षेत्रबाट चुनाव जितेका पौडेल अहिले पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार छन्भने ८६ मतले हारेका भुसाल रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ का उम्मेदवार हुन् ।
उहाँ (भुसाल) ले चुनाव त जितिसक्नुभयो । म सबैलाई आग्रह गर्नचाहन्छु–उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै मतले जिताऔं । मुलुककोराजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि उहाँको खाँचो छ ।’ उप–महासचिवपौडेलले भने,क्षेत्र नं. ३ मा उहाँसहित विश्वासजी र तुलसीजीको जीतपनि सुनिश्चित भैसक्यो । कसैलाई विश्वास लाग्दैन भने भैरहवाकाटोल–टोल, टिकुलिगढ, सियारी, ओमसतिया, शुद्धोधन, सेमलार, मोतिपुरकागाउँ–गाउँका मतदातालाई सोधे हुन्छ ।’ उनले क्षेत्र नं. ३ माभुसालसहित बामगठबन्धनका उम्मेदवारहको जीतको जिम्मा आफूले लिने प्रष्टाए ।'हामी एक अर्काका परिपुरक हौं । एकको अनुहारमा अर्काको छाया'
पत्रकार सम्मेलनमा उप–महासचिवद्धय पौडेलले आफूहरु एक अर्काकोपरिपुरक भएको पनि बताए । उनले भने,।घनश्यामजीमा जे क्षमता छत्यो म मा छैन । म मा जे क्षमता छ त्यो घनश्यामजी मा छैन । यसकोफ्युजन हुँदा देश र रुपन्देहीले काँचुली फेर्छ ।’ उनले आफूहरुप्रतिस्पर्धी नभएको जनाए । ।हामीहरु दुवै जनाले पार्टीमा चुनाव जितेरउप–महासचिव भएका हौं । कार्यकर्ताले हामी दुईजना नै पार्टीमाआवश्यक छ भनेर पठाए ।’ नेता पौडेलले अगाडि भने, हामी दुईप्रतिस्पर्धी होइनौं । यसमा कसैलाई भ्रम नरहोस् ।’ उनले बामएकतादेखि विकासका धेरै काममा नेता भुसाल र आफ्नो उत्तिकै भूमिकारहेको जनाए । उपमहासचिव पौडेलले एकको अनुहारमा अर्काको छायाँदेख्न कार्यकर्ता र मतदातालाई आग्रह गरे । उनले भने, विष्णु पौडेलकोअनुहारमा घनश्याम भुसालको छायाँ देख्नुहोस्, घनश्यामभुसालको अनुहारमा विष्णु पौडेलको छायाँ देख्नुहोस् ।’नाम नलिइकन क्षेत्र नं. ३ का राप्रपा प्रजातान्त्रिकका उम्मेदवार दीपकबोहराले उप–महासचिव भुसालसँग आफ्नो प्रतिस्पर्धा छ भनेर अफवाहफैलाउने दुष्प्रयास गरेको चर्चा गर्दै नेता पौडेलले भने,हामी विरुद्धका कुनै पनि अफवाहले अब काम गर्न सक्दैनन् । हामीहरु एकठिक्काछौं ।
यस्तो घृणित दुष्प्रचारको प्रभावमा कोहीपनि नपरौं ।’ कुनै विचार,दृष्टिकोण, मूल्यमान्यता नै नभएको उम्मेदवारसँग भुसालको प्रतिस्पर्धा
नै रहेको चर्चा गर्दै नेता पौडेलले विकास, समृद्धि र स्थायित्व चाहने क्षेत्रनं. ३ का बासिन्दालाई अहिले महत्वपूर्ण अवसर आएको बताए ।घनश्याम भुसालको विकल्पमा मतदान गर्न सक्ने उम्मेदवार क्षेत्र नं. ३मा कोही छैन । विगत राम्रो नभएकाले केही काम गर्न पनि सक्दैन ।’नेता पौडेलले भने ।नेता पौडेलले चुनावपछि माओवादीसँग एमालेको पार्टी एकता हुने पनिदोहोर्याए । समय अभावका कारण माओवादीसँग चुनावअघि एकता हुननसकेको उल्लेख गर्दै उनले चुनावपछि पार्टी एकता हुनेमा कुनै शंका
नगर्न एमाले र माओवादीका कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।सोही अवसरमा उपमहासचिव भुसालले रुपन्देहीमा बामगठबन्धनको विजयसुनिश्चित भैसकेको बताए । पार्टीभित्र उप–महासचिव पौडेल र आफ्नो
आ–आफ्नै भूमिका रहेको चर्चा गर्दै उनले विरोधी उम्मेदवारलेफैलाएको मिथ्या भ्रमलाई चिर्नुपर्ने बताए ।
क्षेत्र नं. ३ माकम्युनिष्ट र कांग्रेसलाई लडाउने प्रयत्न सफल नभएको बताउँदैउनले कतिपय अवाञ्छित क्रियाकलाप रोकिएको बताए । विकासप्रति आफ्नोप्रष्ट भिजन रहेको उल्लेख गर्दै उनले मतदातालाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।सो अवसरमा क्षेत्र नं. ३ (१) का प्रदेशसभा उम्मेदवार विश्वास बरालले आफू१५ वर्षदेखि रुपन्देहीमा रहेर राजनीति गरेको उल्लेख गर्दै झुट्टाआश्वासन, भ्रम, अफवाहको भरमा कसैले चुनाव नजित्ने बताए । उनले बामगठबन्धनले विजयले मात्र समग्र रुपन्देहीको विकास संभव हुने बताए।